Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u safray magaalada Dhuusomareeb | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u safray magaalada Dhuusomareeb
written by Admin 18/07/2020
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo guddoomin doona Shirka Wadatashiga Heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleed ayaa u amba-baxay magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug.
Madaxweyne Farmaajo ayaa halkaasi uga qeybgalaya shir ay yeelanayaan Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladaha Xubnaha ka ah oo lagu gorfeynayo wadashaqeynta labada heer ee Dowladda iyo doorashooyinka qaran ee dalka kusoo foolleh.
Dhuusomareeb waxaa ku sugan raysal wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre iyo qaar kamid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada.
Maalinta berrito ah ayaa lagu wadaa inuu furmo shirka dowladda federalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo aad looga war sugayo natiijada kasoo baxda shirkaas oo go’aamindoonto nuuca doorashada Soomaaliya.
Guddiga qaran ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa sidoo kale ku sugan magaalada Dhuusomareeb.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo u safray magaalada Dhuusomareeb was last modified: July 18th, 2020 by Admin
Howlaha waxqabad ee hayadaha QM ee Soomaaliya Oktoobar 2020
Hogaamiyeyaasha EU oo ku guuldaraystay in ay soo saraan qorshe wax looga qabanayo dhaqaalaha Yurub.